Apple dia te hanao ny vera nitarina zava-misy marina | Avy amin'ny mac aho
Apple dia mifantoka tanteraka amin'ny zava-misy mitombo, tsy misy isalasalana. Nahita an'io isika vaovao samihafa mifandraika amin'ity teknolojia ity fa ambonin'izay rehetra fantatsika avy amin'ny patanty izay ampidirin'i Apple sy fisoratana anarana. Ny "penultimate" izay ananantsika fahalalana, io dia ny fahaiza-manaon'ny solomaso virtoaly tadiavin'izy ireo noforonina mihoatra ny tsara. Ataovy tonga lafatra.
Rehefa mampiasa zava-misy virtoaly amin'ny iPhone na iPad isika, ny fahafahantsika mamindra ireo zavatra izay "nampidirintsika" dia natao tamin'ny fihetsiky ny fitaovana ihany, ary ny teknolojia dia manamora ny mamantatra ireo hetsika ireo miakatra / midina na mankany amin'izy ireo. . Toy izany koa ny solomaso sy ny fihetsiky ny loha. Nefa Inona no mitranga rehefa mbola eo ny loha ary mihetsika ny maso?
Ao amin'ny patanty vaovao nosoratan'i Apple, io olana io dia resahina ary misy ny vahaolana omena. "Fomba sy fitaovana hampiarahana amin'ny maso amin'ny alàlan'ny angona fakan-tsary"Toy izao no nanondroana ilay anarana vao nisoratra anarana sy nangataka patanty. Izy io dia mamaritra ny zava-misy fa ilana an'io endri-javatra io, fa koa ireo olana aterak'izany.
Ny rafitry ny maso dia matetika misy fakan-tsary mamindra ny sarin'ny mason'ilay mitondra mankany amin'ny mpanara-maso. Ankehitriny ny fandefasana sary amin'ny tahan'ny endriny ampy hahafahana manara-maso, mila rohy fifandraisana miaraka amin'ny bandwidth lehibe. Ny fampiasana rohy fifandraisana toy izany dia mampitombo ny famokarana hafanana sy ny fanjifana herinaratra amin'ny fitaovana misy loha.
Ny vahaolana naroson'i Apple dia ahenao ny fanodinana ilaina hanarahana ny mason'ny mpampiasa ary, raha hanao an'izany, ovaova izay tena voatanisa. Vahaolana iray azo atao dia ny famoahana hazavana miaraka amin'ny hamafin'ny fanodinkodinam-bola avy amin'ny loharano maivana ho an'ny mason'ny mpampiasa:
Ny fomba dia misy mahazoa angon-drakitra ny hamafin'ny hazavana navoakan'ny mason'ny mpampiasa amin'ny endrika plurality of flashes. Ny fomba dia ahitana ny famaritana ny toetran'ny maso manara-maso ny mpampiasa miorina amin'ny angona angovo maivana.
Araka ny lazaintsika hatrany dia mety mijanona eo ireo hevitra ireo, hevitra fotsiny satria tsy maintsy ho tanteraka foana ny patanty.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Apple dia te hanao ny solomaso misy azy
Ny AirPods Studio dia mety ho fisaka fitehirizana tanteraka
Beta faha-XNUMX ho an'ny mpamorona macOS Big Sur